Ivon-toerana ho an'ny siansa misokatra - AfricArXiv
Ivotoerana ho an'ny siansa misokatra
AfricaArXiv sy mpiara-miasa COS hanohana ny fikarohana Pan-Afrikana
Ankoatra ny serivisy famoahana fidirana malalaka ho an'ny vondrom-piarahamoniny, dia hanamora ny fahafaha-manao bebe kokoa amin'ny fanazaran-tena henjana sy azo averina amin'ny laoniny ny AfricaArXiv.
By AfricaArXiv, 1 taona 3 volana lasa izay
Tratra ny tanjona: fampiantranoana mialoha & fikarakarana OSF 2020
Te-handray fotoana fohy izahay hanehoana ny fankasitrahantsika ny olona rehetra izay nandray anjara tamin'ny fandrakofana ny vidin'ny 2020 ho an'ny fampiantranoana sy fanajariana mialoha an'ny AfricaArXiv momba ny Open Science Infrastructure (OSF) nomen'ny Center for Open Science.
By AfricaArXiv, 1 taona 10 volana lasa izay
Saran'ny serivisy ho an'ny fampiantranoana sy fikolokoloana mialoha ny OSF - manohy ny serivisy i AfricArXiv
'Mpanjifa preprint malaza dia miatrika fanidiana noho ny olana ara-bola' Nature News, 1 Feb 2020, doi: 10.1038 / d41586-020-00363-3 Ity no lohatenin'ny lahatsoratra momba ny Nature News omaly izay miresaka momba ny saram-panompoana OSF. Tonga eto ny AfricaArXiv! Manohy ny serivisinay izahay mandritra ny taona 2020 ary miasa amin'ny sori-dalana ary Hamaky bebe kokoa…
By Jo Havemann, 2 taona 11 volana lasa izay
Ny Centre ho an'ny Siansa misokatra sy ny AfricaArXiv Manokatra ny serivisy mialoha ny marika
Charlottesville, VA The Center for Open Science (COS) ary AfricaArXiv dia nanangana serivisy fanomanana vaovao izay hampandroso ny fahalalana siantifika any amin'ny firenena afrikana amin'ny sehatry ny siansa maro. Navoaka ihany koa tao amin'ny cos.io/about/news/center-open-science-and-africarxiv-launch-branded-preprint-service/ AfricaArXiv (Afrikana momba ny siansa afrikanina) dia trano fivarotana fidirana malalaka sy malalaka amin'ny #ScienceinAfrica ho an'ireo mpahay siansa afrikanina zarao ny valin'ny fikarohana nataony Hamaky bebe kokoa…
By Jo Havemann, 4 taona 11 volana lasa izay